[Kudhaunirodha] Bhuku Rese (PDF)
Chiratidzo cheManotsi ePazasi
Sarudzo Yagara Iripo
peji yemusoro wenyaya yeBhuku raMormoni
Saka naizvozvo, kunova kupfupikiswa kwezvinyorwa zvevanhu vaNifai, uye zvakare nevamaRamani—Zvakanyorerwa maRamani, avo vanova vakasara veimba yaIsiraeri; uye zvakare kumuJudha nemuJentairi—Zvakanyorwa pamusana pemurairo, uye zvakare nomweya wechiporofita newekuzarurirwa—Zvakanyorwa ndokusunganidzwa, ndokubva zvavigwa kuna Ishe, kuti zvisazoparadzwa—Kuti zvizouya nechipo nesimba raMwari kuti zvidudzirwe—Zvakasimbiswa noruoko rwaMoronai, zvikavigwa kuna Ishe, kuti zvizouya munguva yakafanira kuburikidza namaJentairi—Kududzirwa kwazvo kunoitwa nechipo chaMwari.
Bhuku raMormoni ibhuku remagwaro matsvene angafananidzwe neari muBhaibheri. Magwaro anotaura nezvemabasa aMwari pakati pevanhu vaigara mumaAmerica makare-kare, uye rine kuzara kwevhangeri risingaperi.
Tsananguro Pfupi yezveBhuku raMormoni
Bhuku raMormoni chinyorwa chinoyera chavanhu vakare vekuAmerica, uye chakanga chakanyorwa pamahwendefa edare. Mhando ina dzemahwendefa edare dzinotaurwa nezvadzo mubhuku iri:
Nifai anotangisa nyaya yevanhu vake—Rihai anoona muchiratidzo mutswi wemoto uye anoverenga kubva mubhuku rehuporofita—Anorumbidza Mwari, anofanotaura pamusoro pokuuya kwaMesia, uye anoporofita pamusana pokuparadzwa kweJerusarema—Anoshungurudzwa nemaJuda. Zvingangove makore 600 Kristu asati azvarwa.
Rihai anoenda nemhuri yake murenje riri pedyo neGungwa Dzvuku—Vanosiya pfuma yavo—Rihai anopira kuna Ishe nokudzidzisa vanakomana vake kuti vachengetedze mirairo—Ramani naRemueri vanotsutsumwa pamusana pababa vavo—Nifai anoteerera nokunamata nokutenda; Ishe vanotaura kwaari, uye anosarudzwa kuti atonge vakoma vake. Zvingangove makore 600 Kristu asati azvarwa.
Vanakomana vaRihai vanodzokera kuJerusarema kuti vandotora mahwendefa endarira—Rabhani anoramba kuvapa mahwendefa—Nifai anokurudzira nokusimbisa vakoma vake—Rabhani anoba zvinhu zvavo oedza kuvauraya—Ramani naRemueri vanorova Nifai naSemu zve vanopopoterwa nengirozi. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anouraya Rabhani atumwa naIshe uye obva atora mahwendefa endarira nenjere—Zoramu anosarudza kubatana nemhuri yaRihai murenje. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Saria anotsutsumwa pamusana paRihai—Vose vanofara shure kwokudzoka kwavanakomana vavo—Vanopa mipiro—Mahwendefa endarira ane zvinyorwa zvaMosesi navaporofita—Mahwendefa anoratidza kuti Rihai ndewechizvarwa chaJosefa—Rihai anoporofita pamusana pembeu yake nokuchengetedzwa kwamahwendefa. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anonyora pamusoro pezvinhu zvaMwari—Chinangwa chaNifai chiri chokunyengetedza vanhu kuti vauye kuna Mwari waAbrahama vaponeswe. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Vanakomana vaRihai vanodzokera kuJerusarema uye vanokoka Ishmaeri nemba yake kuti ave navo parwendo rwavo—Ramani navamwe vanopanduka—Nifai anokurudzira vakoma vake kuti vave nokutenda munaIshe—Vanomusunga netambo uye vanoronga zvekumuuraya—Anosunungurwa nesimba rokutenda—Vakoma vake vanokumbira ruregerero—Rihai nechikwata chake vanoita mupiro nezvibairo zvekupisa. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Rihai anoona chiratidzo chemuti weupenyu—Anodya muchero wemuti uyu obva ada kuti mhuri yake iudyewo—Anoona danda resimbi, kanzira kakamanikana uye kakamanika, nebute rerima rinofukidza vanhu—Saria, Nifai, naSemu vanodya muchero, asi Ramani naRemueri vanoramba. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anogadzira zvinyorwa zviri paviri—Zvose zvinodaidzwa kunzi mahwendefa aNifai—Mahwendefa makuru anotaura nezvenhoroondo yevanhu; madiki anotaura nezvezvinhu zvinoera. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Rihai anofembera kuti maJuda achatorwa muusungwa nemaBabironi—Anotaura nezvekuuya kwaMesia, Muponesi, Mununuri pakati pemaJuda—Rihai anotaurawo nezvekuuya kwemumwe achabhabhatidza Gwayana raMwari—Rihai anotaura nezvekufa nekumuka kwaMesia—Anofananidza kupararira nekuungana kwaIsraeri pamuti wemuorivhi—Nifai anotaura nezveMwanakomana waMwari, nezvechipo cheMweya Mutsvene, nezvekudikanwa kwetsika dzakatwasanuka. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anoona Mweya waIshe uye anoratidzwa muchiratidzo muti weupenyu—Anoona amai veMwanakomana waMwari uye anodzidza nekuzvidzikisira kwaMwari—Anoona rubhabhatidzo, ushumiri, nekuroverwa kweGwayana raMwari—Anoonawo kudaidzwa neushumiri hweVaapositori veGwayana vaneGumi neVaviri. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anoona muchiratidzo nyika yechipikirwa; kururama, huipi, nekupunzika kwevagari vayo; kuuya kweGwayana raMwari pakati pavo; kuti Vadzidzi vaneGumi neVaviri neVaapositori vaneGumi neVaviri vachatonga sei Israeri; nekusemesa neutsvina hweavo vanoderera mukusatenda. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anoona muchiratidzo chechi yadhiabhorosi yamiswa pakati pamaJentairi, kuwanika nekupambwa kweAmerica, kurasika kwemamwe matsamba anokosha emuBhaibheri, nekuzorasika kwemaJentairi, kudzorerwa kwevhangeri, kuuya kwemagwaro matsvene emazuva ekupedzisira, nekuvakwa kweZioni. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Ngirozi inotaurira Nifai nezvemaropafadzo nekutukwa kuchawira pamusoro pemaJentairi—Kune chechi mbiri chete: Chechi yeGwayana raMwari nechechi yadhiabhorosi—Vatendi vaMwari mukati memarudzi ose vanotambudzwa nechechi huru inonyangadza—Muapositori Johane achanyora maererano nekuguma kwenyika. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Mbeu yaRihai ichatambira vhangeri kubva kumaJentairi mumazuva ekupedzisira—Chizvarwa chaIsraeri chinofananidzwa nemuti wemuorivi une mapazi achabatanidzwa pakare—Nifai anodudzira chiratidzo chemuti weupenyu uye anotaura nezvekuenzanisa kwaMwari mukubvisa vatadzi muvakarurama. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Vakaipa vanotora chokwadi sechakaoma—Vanakomana vaRihai vanoroora vanasikana vaIshmaeri—Riahona inovatungamirira mukufamba kwavo murenje—Mazwi anobva kuna Ishe anonyorwa paRiahona nguva nenguva—Ishmaeri anofa; mhuri yake inotsutsumwa pamusana pekutambudzika. Zvingangove makore 600 kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.
Nifai anorairwa kuvaka ngarava—Vakoma vake vanomupikisa—Anovakurudzira achivayeuchidza pamusana pengano dzaMwari nezvaakaita kuvaIsraeri—Nifai anozadzwa nesimba raMwari—Vakoma vake vanorambidzwa kumubata, potse vakamubata vangaome serutsanga. Zvingangove makore 592 kusvika ku591 Kristu asati azvarwa.
Ngarava inopedzwa—kuzvarwa kwaJakobho naJosefa kunotaurwa—Vanotangisa rwendo rwekuenda kunyika yechipikirwa—Vanakomana vaIshmaeri navakadzi vavo vanobatana mukupanduka—Nifai anosungwa, ngarava inodzoserwa shure nedutu remhepo yakaipa—Nifai anosunungurwa, uye kuburikidza nomunamato wake dutu remhepo rinopera—Vanhu vanosvika munyika yechipikirwa. Zvingangove makore 591 kusvika ku589 Kristu asati azvarwa.
Nifai anoita mahwendefa esimbi uye obva anyora rungano rwevanhu vekwake—Mwari vaIsraeri vachauya kwapfuura mazana matanhatu emakore kubvira panguva yakabva Rihai muJerusarema—Nifai anotaura pamusoro pekutambudzwa nekuroverwa kwavo—MaJuda vachashorwa uye vagoparadzaniswa kudakara mazuva ekupedzisira, pavachazodzokera kuna Ishe. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Ishe vanoratidza zvavanoda kuita kuna Israeri—Israeri akasarudzwa muchoto chematambudziko uye achaenda achibva muBabironi—Enzanisai naIsaya 48. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Mesia achave mwenje kuvaJentairi uye achasunungura vasungwa—Israeri ichaunganidzwa nesimba mumazuva ekupedzisira—Madzimambo ndivo vachave madzibaba ekuvarera—Enzanisai naIsaya 49. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Israeri ichapararira nepasi pose—MaJentairi vacharera nokuriritira Israeri nevhangeri mumazuva ekupedzisira—Israeri achaunganidzwa agoponeswa, uye vakaipa vachatsva semashanga—Umambo hwadhiabhorosi huchaparadzwa, uye Satani achasungwa. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Rihai anoporofita pamusoro penyika yorusununguko—Mbeu yake ichaparadzwa nokurangwa kana vachinge varamba Mutsvene waIsraeri—Anokurudzira vanakomana vake kuti vapfeke nguwo dzoutsvene. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Rununuro rwunouya nomuna Mesia Mutsvene—Kusununguka pakuzvisarudzira (kuzvifungira) kunofanirwa kunge kuripo kuti tirarame uye tibudirire—Kutadza kwaAdama kwaive kwekuti vanhu vavepo—Vanhu vanokwanisa kusarudza rusununguko noupenyu hwokusingaperi. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Josefa muEgipita anoona maNifai muchiratidzo—Akaporofita pamusoro paJoseph Smith, muoni wamazuva ekupedzisira; nezvaMosesi, anozosunungura Israeri; nokuuya kweBhuku raMormoni. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
Rihai anoraira nokukomborera vezvizvarwa zvake—Anofa nokuvigwa—Nifai anobwinya mukunaka kwaMwari—Nifai anoisa kuvimba kwake kwose muna Ishe nokusingaperi. Zvingangove makore 588 kusvika ku570 Kristu asati azvarwa.
MaNifai anozvitsaura kubva kumaRamani, vochengeta mutemo waMosesi, nokuvaka temberi—Nemhaka yekusatenda kwavo, maRamani anobviswa pamberi paIshe, vanotukwa uye vanova shamhu kumaNifai. Zvingangove makore 588 kusvika ku559 Kristu asati azvarwa.
Jakobho anoitazve nhoroondo yerungano rwemaJuda: Kutapwa muBabironi nekudzoka kwavo; ufundisi nekuroverwa kweMutsvene waIsraeri; ruyamuro rwakatambirwa kubva kumaJentairi; nekuzodzorerwa kwemaJuda pakare mumazuva ekupedzisira vazotenda kuna Mesia. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Isaya anotaura saMesia—Mesia achave nerurimi rwevakadzidza—Achapa musana wake kune vanorova—Haazovhiringwa—Enzanisai naIsaya 50. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Mumazuva ekupedzisira, Ishe vachanyaradza Zioni uye vagounganidza Israeri—Vakanunurwa vachauya kuZioni pakati pemufaro mukuru—Enzanisai naIsaya 51 uye 52:1–2. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
MaJuda achaungana munyika dzavo dzose dzechipikirwa—Rudzikinuro rwunoripira vanhu kubva muKupunzika—Miviri yaavo vakafa ichamuka kubva mumakuva, mweya yavo ichabva kugehena nomuparadiso—Vachatongwa—Rudzikinuro rwunoponesa kubva parufu, gehena, dhiabhorosi, nokurwadziwa kusingaperi—Vatsvene vanozoponeswa muumambo hwaMwari—Kurangwa kwezvivi kunopiwa—Mutsvene waIsraeri ndiye muchengeti wapamusuo. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
MaJuda acharovera pamuchinjikwa Mwari vavo—Vachapararira kudakara vatangisa kutenda kwavari—America ichave nyika yerusununguko isina mambo anotonga—Wadzanai naMwari uye mugowana ruponeso kuburikidza nenyasha dzake. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Jakobho akaona Mununuri wake—Murau waMosesi mucherechedzo waKristu uye unoratidza kuti achauya. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Isaya anoona temberi yemazuva ekupedzisira, kuunganidzwa kwaIsraeri, nekutonga kwechiuru chemakore nerunyararo—Vanodada nevakaipa vachaderedzwa muKuuya Kwechipiri—Enzanisai naIsaya 2. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Juda neJerusarema dzicharangwa pamusana pekusateerera kwavo—Ishe vanotetererera uye vagotonga vanhu vavo—Vanasikana veZioni vanotukwa nekunetswa nenzira yekuda kwavo zvinhu zvenyika—Enzanisai naIsaya 3. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Zioni nevanasikana vake achanunurwa nekucheneswa mumazuva ezviuru zvamakore—Enzanisai naIsaya 4. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Munda wemizambiringa waIshe (Israeri) uchave gwenga, uye vanhu vake vachapararira kwose-kwose—Matambudziko achauya pavari mukurasika nekupararira kwavo—Ishe vachasimudza mureza uye vounganidza Israeri—Enzanisai naIsaya 5. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Isaya anoona Ishe—Zvitadzo zvaIsaya zvinoregererwa—Anodaidzwa kuti aporofite—Anoporofita kurambwa kwedzidziso yaKristu nemaJuda—Vakasara vachadzoka—Enzanisa naIsaya 6. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Efraimi naSiria vanoita hondo naJuda—Kristu achazvarwa nemhandara—Enzanisai naIsaya 7. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Kristu achava sedombo rinogumbura uye sebwe rekutsamwisa—Tsvagai Ishe, kwete kuve varoyi vanoita zvekudongorera—Dzokerai kumurau nekuuchapupu kuti mutungamirwe—Enzanisai naIsaya 8. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Isaya anotaura nezvaMesia—Vanhu vari murima vachaona chiedza chikuru—Tinozvarirwa mwana—Achave Jinda reRunyararo uye agotonga agere pachigaro cheushe chaDavidi—Enzanisa naIsaya 9. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Kuparadzwa kweAsiria mufananidzo wekuparadzwa kwevakaipa Pakuuya Kwechipiri—Vanhu vashoma vachasara mushure mekudzoka kwaIshe zvakare—Vakasara vemba yaJakobo vachadzoka musi iwoyo—Enzanisa naIsaya 10. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Bazi raJesi (Kristu) richatonga mukururama—Ruzivo rwaMwari rwuchafukidza pasi pose munguva inonzi Mereniamu—Ishe vachasimudza mureza vounganidza Israeri—Enzanisa naIsaya 11. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Munguva yeMireniamu vose vanhu vacharumbidza Ishe—Vachange achigara pakati pavo—Enzanisa naIsaya 12. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Kuparadzwa kweBabironi kunofanana nekuparadzwa kuchavepo muKuuya Kwechipiri—Richave zuva rehasha nekudzorera—Babironi (nyika) ichapunzika zvachose—Enzanisa naIsaya 13. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Israeri ichaunganidzwa uye igogara muzororo remireniamu—Rusifa akatandwa kudenga nenzira yekupanduka—Israeri achakunda Babironi (nyika)—Enzanisa naIsaya 14. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Nifai anofadzwa nekuisa zvinhu pachena—Chiporofita chaIsaya chichanzwikwa mumazuva ekupedzisira—MaJuda vachadzoka kubva kuBabironi, vorovera Mesia, uye voparadzwa vorangwa zvakaomarara—Vanozoponeswa kana vave kutenda munaMesia—Achatanga kuuya mushure memazana matanhatu emakore Rihai abva muJerusarema—MaNifai vanotevedza murau waMosesi uye vachitenda munaKristu, uyo Mutsvene waIsraeri. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Kristu achadzidzisa kuvaNifai—Nifai anofanoona kuparadzwa kwevanhu vekwake—Vachataura vari muguruva—MaJentairi vachavaka machechi dzemanyepo nezvikwata zvemuruvande—Ishe vanorambidza vanhu kuita hupirisita husakarurama. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Rima nekurasika kuchazadza nyika yose mumazuva ekupedzisira—Bhuku raMormoni richauya—Vapupuri vatatu vachapupura nezvebhuku iri—Vanhu vakadzidza zvikuru vachati havakwanisi kuverenga bhuku rakanamwa—Ishe vachaita basa rakanakisisa nechishamiso—Enzanisa naIsaya 29. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Chechi zhinji dzemanyepo dzichavakwa mumazuva ekupedzisira—Dzichadzidzisa, manyepo, nezvisina maturo, nezvakapusa mukudzidzisa kwadzo—Kurasika pachitendero kuchawanda nenzira yevadzidzisi vemanyepo—Dhiabhorosi achagara mumwoyo yevanhu—Achadzidzisa nhema dzakasiyana-siyana. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
MaJentairi vazhinji vacharamba Bhuku raMormoni—Vachati, Hatidi rimwe Bhaibheri—Ishe vanotaura kumarudzi akawanda—Vachatonga nyika kubva mune mabhuku. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
MaJentairi vakapinduka vachaverengerwa kuvanhu vechibvumirano—MaRamani mazhinji nemaJuda vachatenda shoko uye vobva vave vanofadza kwazvo—Israeri ichadzorerwa pakare uye vakaipa vachiparadzwa. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Nifai anotaura chikonzero chokubhabhatidzwa kwaKristu—Vanhu vanofanira kutevera Kristu, vobhabhatidzwa, vogamuchira Mweya Mutsvene; voshingirira kusvika kumagumo kuti vagoponeswa—Kutendeuka nokubhabhatidzwa ndiwo musuwo wenzira yakamanikana uye yakamanika—Upenyu hwokusingaperi hunouya kuna avo vanochengeta mirairo shure kwokubhabhatidzwa. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Ngirozi dzinotaura nesimba roMweya Mutsvene—Vanhu vanofanirwa kunamata vawane ruzivo pachavo kubva kuMweya Mutsvene. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Mazwi aNifai ndeechokwadi—Anopupura pamusana paKristu—Avo vanotenda munaKristu vanotenda mazwi aNifai, ayo achamira seuchapupu pamberi penzvimbo yekutongerwa. Zvingangove makore 559 kusvika ku545 Kristu asati azvarwa.
Jakobho naJosefa vanoedza kunyengetedza vanhu kuti vatende munaKristu, nekuti vachengetedze mirau yake—Nifai anofa—Huipi hunotonga mumaNifai. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Jakobho anorambidza rudo rweupfumi, kuzvida, nekusazvibata—Vanhu vanokwanisa kutsvaka upfumi hunoyamura vamwe vavo—Jakobho anoshora tsika yebarika isina mvumo—Ishe anofarira kuzvibata kwevanhukadzi. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Vakachena mumwoyo vanogashira shoko rinofadza raMwari—Kururama kwemaRamani kunopfuura kwemaNifai—Jakobho anoyambira kune vanoda hupombwe, meso-meso, nechitema chose. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Vose maporofita vainamata Baba muzita raKristu—Kupira kwaAbrahama mwana wake Isaka kwakafanana nekwaMwari neWavo Mumwechete Akaberekwa—Vanhu vakafanira kuyanana naMwari neRudzikinuro—VaJuda vacharamba dombo rehwaro. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Jakobho anotaura mazwi aZenosi akafanana nerungano rwemuti wemuorivi wekudyarwa nemuorivi wemusango—Vakafanana nemaIsraeri nemaJentairi—Kupararira kwaIsraeri nokuzounganidzwa kwake kunotariswa—MaNifai nemaRamani nemba yose yaIsraeri zvinotaurwa—MaJentairi vachabatanidzwa naIsraeri—Gare-gare munda wemizambiringa uchapiswa. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Ishe achadzora Israeri mumazuva ekupedzisira—Nyika inobva yapiswa nemoto—Vanhu vakafanira kutevera Kristu kuti vanzvenge dziva remoto nesuriferi. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Sheremu anoramba Kristu, anokakavadzana naJakobho, anoda kuona chiratidzo, uye anobva arohwa naMwari—Vose vaporofita vakataura nezvaKristu nerudzikinuro rwake—VaNifai vaigara vachingopembereka, vakaberekerwa mukunetseka vachivengwa nemaRamani. Zvingangove makore 544 kusvika ku421 Kristu asati azvarwa.
Enosi anonamata nesimba zvekuti anobva aregererwa zvivi zvake—Izwi raIshe rinouya mupfungwa dzake, richimuvimbisa ruponeso rwemaRamani muzuva richauya—MaNifai anoedza kudzosa maRamani—Enosi anofara noMununuri wake. Zvingangove makore 420 Kristu asati azvarwa.
MaNifai anochengetedza mutemo waMosesi, vanotarisira kuuya kwaKristu, uye vanobudirira munyika—Maporofita vazhinji vanoshanda zvakasimba kuchengetedza vanhu vari munzira yechokwadi. Zvingangove makore 399 kusvika ku361 Kristu asati azvarwa.
Omuni, Amaroni, Kemishi, Abhinadhomu, naAmarekai, vose vanoravana kuchengeta zvinyorwa—Mosaya anowana vanhu veZarahemura, vakabva Jerusarema mumazuva aZedekia—Mosaya anoitwa mambo wavo—Zvizvarwa zvaMureki kuZarahemura zvakange zvawana Korianduma, wekupedzisira wemaJaredhi—Mambo Benjamini anogadzwa ushe mushure maMosaya—Vanhu vakafanira kupa mweya yavo somupiro kuna Kristu. Zvingangove makore 323 kusvika ku130 Kristu asati azvarwa.
Mormoni anopfupikisa mahwendefa makuru aNifai—Anoisa mahwendefa madiki nemamwe mahwendefa—Mambo Benjamini vanoita kuti munyika muve nerunyararo. Zvingangove makore 385 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mambo Benjamini vanodzidzisa vanakomana vavo mutauro nezviporofita zvemadzibaba avo—Kunamata nemagariro avo zvakachengetedzwa pamusana pezvinyorwa zvakachengetwa pamahwendefa akasiyana-siyana—Mosaya anosarudzwa kuti ave mambo uye obva apiwa kuti achengete zvinyorwa nezvimwe zvinhuwo. Zvingangove makore 130 kusvika ku124 Kristu asati azvarwa.
Mambo Benjamini vanotaura kuvanhu vavo—Vanotaura nezvekuenzana, nekunaka neumwari mukutonga kwavo—Vanovaraira kuti vashandire Mambo vavo Vokudenga—Avo vanopandukira Mwari vachatambudzika nokurwadziwa semoto usingadzime. Zvingangove makore 124 Kristu asati azvarwa.
Mambo Benjamini vanoenderera mberi nokutaura kwavo—Ishe Vanamasimba ose vachaparidza kuvanhu vose mutabernakeri yevhu—Ropa richabuda nemumaburi ose eganda ravo vachiripira zvitadzo zvenyika—Ravo ndiro chete zita rinounza ruponeso—Vanhu vanokwanisa kubisa munhu wenyama nokuva Vatendi kuburikidza noRudzikinuro—Kurwadziwa kwovakaipa kuchaita somoto nesuriferi. Zvingangove makore 124 Kristu asati azvarwa.
Mambo Benjamini vanoenderera mberi nokutaura kwavo—Ruponeso rwunouya noRudzikinuro—Tendai munaMwari kuti mugoponeswa—Chengetedzai ruregerero rwezvivi zvenyu nokutendeseka—Ipa zvimwe zvezvaunazvo kuvarombo—Ita zvinhu zvose noruzivo nokururama. Zvingangove makore 124 Kristu asati azvarwa.
Vatendi vanova vanakomana navanasikana vaKristu kuburikidza nokutenda—Zvino vanoshevedzwa nezita raKristu—Mambo Benjamini anovakuridzira kuti vave vakasimba uye vasingazungunuke mumabasa akanaka. Zvingangove makore 124 Kristu asati azvarwa.
Mambo Benjamini vanonyora mazita evanhu vachibva vasarudza vapirisita vekuvadzidzisa—Mosaya anotonga samambo vakarurama. Zvingangove makore 124 kusvika ku121 Kristu asati azvarwa.
Amoni anowana nyika yaRihai-Nifai, umo Rimuhai aive mambo—Vanhu vaRimuhai inhapwa dzemaRamani—Rimuhai anotaura rungano rwavo—Muporofita (Abhinadhai) akanga apupura kuti Kristu ndiMwari naBaba wezvinhu zvose—Avo vanodyara tsvina vanokohwa chinyamupupuri, uye avo vanoisa ruvimbo rwavo munaIshe vachaponeswa. Zvingangove makore 121 Kristu asati azvarwa.
Amoni anodzidzisa vanhu vaRimuhai—Anonzwa nezvemahwendefa makumi maviri ane mahwendefa mana emaJaredhi—Zvinyorwa zvakare zvinogona kududzirwa nevaoni—Hakuna chipo chinokunda cheuoni. Zvingangove makore 121 Kristu asati azvarwa.
Zenifi anotungamira chikwata kubva muZarahemura kuti anotora nyika yaRihai-Nifai—Mambo wemaRamani anovabvumira kuitora—Panoita hondo pakati pemaRamani nevanhu vaZenifi. Zvingangove makore 200 kusvika ku187 Kristu asati azvarwa.
Mambo Ramani anofa—Vanhu vake vanopenga uye magandanga uye vanotevedza tsika dzemanyepo—Zenifi nevanhu vake vanovakurira. Zvingangove makore 187 kusvika ku160 Kristu asati azvarwa.
Mambo Noa anotonga nokuipa—Anofadzwa neupenyu hwemhere-mhere nevakadzi vake nepfambi dzake—Abhinadhai anoporofita kuti vanhu vachatorwa muusungwa—Upenyu hwake hunotsvakwa namambo Noa. Zvingangove makore 160 kusvika ku150 Kristu asati azvarwa.
Abhinadhai anoiswa mutirongo pamusoro pekuporofita kwake kuparadzwa kwevanhu nerufu rwamambo Noa—Vapirisita vemanyepo vanotaura magwaro matsvene uye vachinyepera kutevedza mutemo waMosesi—Abhinadhai anotangisa kuvadzidzisa Mirairo Ine Gumi. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Abhinadhai anodzivirirwa nesimba dzvene—Anodzidzisa Mirairo Ine Gumi—Ruponeso harwuuye nemutemo waMosesi wega—Mwari pachavo vachaita rudzikinuro uye vonunura vanhu vavo. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Isaya anotaura saMesia—Kunyadziswa nokutambudzwa kwaMesia zvinoratidzwa—Anoita mweya wake mupiro wechitema nokureverera vatadzi—Enzanisai naIsaya 53. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Kuti Kristu ndiBaba neMwanakomana sei—Achapindira uye agotakura kutadza kwevanhu vake—Ivo nevaporofita vatsvene vose imbeu yake—Anoita kuti kuve neKumuka kwevakafa—Vana vaduku vane upenyu hwokusingaperi. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Mwari vanoponesa vanhu kubva mukurasika nokupunzika kwavo—Avo vanoita zvenyika vanogara sekunge pasina rununuro—Kristu anoita kuti kuve nokumuka kuvakafa neupenyu husingaperi kana kuti kuraswa kusingaperi. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Aruma anotenda onyora mazwi aAbhinadhai—Abhinadhai anotambudzika murufu rwomoto—Anoporofita pamusana pezvirwere norufu rwomoto kune vakamuuraya. Zvingangove makore 148 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoparidza muchivande—Anoratidza zvibvumirano zvokubhabhatidza achibhabhatidza pamvura dzaMormoni—Anotangisa Chechi yaKristu nokugadza vapirisita—Vanozviriritira pachavo nokudzidzisa vanhu—Aruma navanhu vake vanotiza Mambo Noa kuenda murenje. Zvingangove makore 147 kusvika ku145 Kristu asati azvarwa.
Gideoni anotsvaka kuuraya Mambo Noa—MaRamani vanopinda kurwisa nyika—Mambo Noa anouraiwa nokupiswa—Rimuhai anotonga ari pasi pemumwe mambo. Zvingangove makore 145 kusvika ku121 Kristu asati azvarwa.
Vamwe vevanasikana vemaRamani vanopambwa nevapirisita vaNoa—MaRamani vanorwisa Rimuhai nevanhu vake—Vehondo dzemaRamani vanodzorwa nekudzikamiswa mumashure nokukatyanadzwa. Zvingangove makore 145 kusvika ku123 Kristu asati azvarwa.
Vanhu vaRimuhai vanorangwa nokukurirwa namaRamani—Vanhu vaRimuhai vanosangana naAmoni vachibva vatendeutswa—Vanotaurira Amoni nezvemakumi maviri anemana emahwendefa emaJaredhi. Zvingangove makore 122 kusvika ku121 Kristu asati azvarwa.
Kunorongwa kuti vanhu vatize muusungwa hwemaRamani—MaRamani vanoitwa kuti vararadze—Vanhu vanotiza, vodzokera kuZarahemura, uye vobva vave pasi pamambo Mosaya. Zvingangove makore 121 kusvika ku120 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoramba kuve mambo—Anoshanda semupirisita wepamusoro—Ishe anoranga vanhu vake, uye maRamani anokunda nyika yeHerami—Amuroni, mutungamiri wevapirisita vakaipa vaNoa, anotonga ari pasi pamambo wamaRamani. Zvingangove makore 145 kusvika ku121 Kristu asati azvarwa.
Amuroni anotambudza Aruma nevanhu vake—Vanozouraiwa kana vakanamata—Ishe anoita kuti mitoro yavo inge yakareruka—Anovabvisa muusungwa,uye ndokubva vadzokera kuZarahemura. Zvingangove makore 145 kusvika ku120 Kristu asati azvarwa.
Zvizvarwa zvaMureki kuZarahemura vanove maNifai—Vanonzwa nezvevanhu vekwaAruma neveZenifi—Aruma anobhabhatidza Rimuhai nevanhu vake vose—Mosaya anopa simba Aruma kuti aronge Chechi yaMwari. Zvingangove makore 120 Kristu asati azvarwa.
Nhengo zhinji dzeChechi dzinotungamirwa muchitema nevasingatende—Aruma anovimbiswa upenyu hwokusingaperi—Avo vanotendeuka vagobhabhatidzwa vanowana ruregerero—Nhengo dzeChechi dziri muzvitema dzinotendeuka nokureurura kunaAruma nekunaIshe dzicharegererwa; tadzezvo, havazoverengerwa kunhengo dzeChechi. Zvingangove makore 120 kusvika ku100 Kristu asati azvarwa.
Mosaya anorambidza kutambudzana uye anokurudzira kuti vanhu vabatwe zvakafanana—Aruma mudiki nevana vana vaMosaya vanotsvaka kuparadza Chechi—Ngirozi inouya uye yovataurira kuti vasiye nzira yavo yakaipa—Aruma anoitwa chimumumu—Rudzi rwose rwevanhu rwakafanira kuzvarwa zvakare kuti rwuwane ruponeso—Aruma nevana vaMosaya vanodaidzira mazwi anofadza. Zvingangove makore 100 kusvika ku92 Kristu asati azvarwa.
Vanakomana vaMosaya vanoenda kunoparidza kumaRamani—Vachishandisa matombo maviri ekuonesa, Mosaya anodudzira mahwendefa emaJaredhi. Zvingangove makore 92 Kristu asati azvarwa.
Mosaya anoti kunze kwekuti kuve namambo ngakusarudzwe vatongi—Madzimambo asina kururama anotungamira vanhu vavo mukutadza—Aruma mudiki anosarudzwa kuve mukuru wevatongi nekuda kwevanhu—Ndiyewo mufundisi wepamusoro weChechi—Aruma Mukuru naMosaya vanofa. Zvingangove makore 92 kusvika ku91 Kristu asati azvarwa.
Neho anodzidzisa dzidziso dzemanyepo, anovamba chechi, anounza hupirisita husakarurama asina kufanira, uye ouraya Gideoni—Neho anourairwa mhosva dzake—Hupirisita husakarurama nekunetsana zvinopararira muvanhu—Vapirisita vanozviriritira, vanhu vanochengeta varombo, Chechi inobudirira. Zvingangove makore 91 kusvika ku88 Kristu asati azvarwa.
Amurisai anotsvaka kuve mambo uye anorambwa nezwi revanhu—Vateveri vake vanomuita mambo—MaAmurisai vanoita hondo nemaNifai uye vobva vakundwa—MaRamani nemaAmurisai vanobatana uye vanokundwa—Aruma anouraya Amurisai. Zvingangove makore 87 Kristu asati azvarwa.
MaAmurisai vakange vazviisa rupawo maererano nezwi rechiporofita—MaRamani akashurikidzirwa pamusana pehupanduki hwavo—Vanhu vanozvishurikidzira vega—MaNifai vanokunda imwezve hondo yemaRamani. Zvingangove makore 87 kusvika ku86 Kristu asati azvarwa.
Aruma anobhabhatidza zviuru zvevatendeuki—Kutadza kunopinda muChechi, uye kuenderera mberi kweSangano kunokanganiswa—Nifaiha anoitwa mutongi mukuru—Aruma, semupirisita wepamusoro, anopa nguva yake yose kuhushumiri. Zvingangove makore 86 kusvika ku83 Kristu asati azvarwa.
Kuti tiwane ruponeso, vanhu vanofanira kutendeuka nokuchengetedza mirairo, vozvarwa patsva, vashambidze nguwo dzavo muropa raKristu, vazvininipise vazvibvise kuzvikudza noruchiva, nokuita mabasa outsvene—Mufudzi Akanaka anodaidza vanhu vake—Avo vanoita mabasa akaipa vana vadhiabhorosi—Aruma anopupura chokwadi chedzidziso yake nokuraira vanhu kuti vatendeuke—Mazita aVatsvene achanyorwa mubhuku roupenyu. Zvingangove makore 83 Kristu asati azvarwa.
Chechi yemuZarahemura rinocheneswa uye ndokubva ragadziridzwa—Aruma anoenda kuGideoni kunoparidza. Zvingangove makore 83 Kristu asati azvarwa.
Kristu achazvarwa naMaria—Achasunungura majoto erufu uye agotakura zvitadzo zvevanhu vake—Avo vanotendeuka, vanobhabhatidzwa, uye vanochengetedza mirau vachawana upenyu hwokusingaperi—Utsvina haungawane nhaka yeumambo hwaMwari—Kuzvirereka, rutendo, tarisiro, nerudo rwakadzama zvinodiwa. Zvingangove makore 83 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoparidza uye achibhabhatidza muMereki—Anorambwa muAmonaiha ndokubva abvamo—Ngirozi inomuti adzokere anodaidzira kutendeuka kuvanhu—Anotambirwa naAmureki, uye vari vaviri vanoparidza muAmonaiha. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoudza vanhu veAmonaiha kuti vatendeuke—Ishe vachanzwira tsitsi kumaRamani mumazuva ekupedzisira—Kana maNifai akasiya chiedza, vachaparadzwa nemaRamani—Mwanakomana waMwari achauya nokukurumidza—Achanunura avo vanotendeuka, vagobhabhatidzwa, uye vaine rutendo muzita rake. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Rihai akabva kuna Manase—Amureki anotaura rungano rwekuudzwa kwaakaitwa nengirozi kuti achengete Aruma—Minamato yevakarurama inoita kuti vanhu vasaparadzwe—Magweta nevatongi vasina kururama vanoisa hwaro hwekuti vanhu vaparadzwe. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Tsika yemari yamaNifai inopihwa—Amureki anonetsana naZiziromu—Kristu haazoponesa vanhu muzvitadzo zvavo—Avo chete vanowana umambo hwokudenga vachaponeswa—Vanhu vose vachamutswa vasisazofa—Hakuna rufu shure Kwokumutswa kwevakafa. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoitirana nharo naZiziromu—Zvakavanzika zvaMwari zvinopiwa kune vakatendeseka chete—Vanhu vanotongwa nezvavanofunga, zvavanotenda, mazwi avo, namabasa—Vakaipa vachafa rufu rwomweya—Upenyu huno ndohwekuyedzwa—Zano rerununuro rinounza Kumutswa kuvakafa, nokutenda, kukanganwirwa pazvivi—Vanotendeuka vanopihwa tsitsi kuburikidza noMwanakomana Mumwechete Akaberekwa. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Varume vanodaidzwa kuti vave vapirisita vepamusoro nenzira yerutendo rwavo rwakawanda nemabasa akanaka—Vanonzi vadzidzise mirairo—Kuburikidza nekururama vanoitwa kuti vave vatsvene uye vopinda muzororo raIshe—Merkizedeki aive mumwe weava—Ngirozi dziri kutaura mashoko akanaka munyika yose—Dzichaburitsa pachena kuuya chaiko kwaKristu. Zvingangove makore 82 Kristu asati azvarwa.
Aruma naAmureki vanoiswa mutirongo uye vogorohwa—Vanotenda nemagwaro avo matsvene vanopiswa nemoto—Vanofira Ishe vanotambirwa navo mukubwinya—Madziro etirongo anotsemuka uye achibva angondomoka—Aruma naAmureki vanoponeswa, uye vanovanetsa vanouraiwa. Zvingangove makore 82 kusvika ku81 Kristu asati azvarwa.
Aruma naAmureki vanoenda kuSidhomu uye vanomisa chechi—Aruma anorapa Ziziromu, anobva auya muChechi—Vazhinji vanobhabhatidzwa, uye Chechi ichibva yabudirira—Aruma naAmureki vanoenda kuZarahemura. Zvingangove makore 81 Kristu asati azvarwa.
MaRamani vanoparadza vanhu veAmonaiha—Zoramu anotungamira maNifai mukukunda maRamani—Aruma naAmureki nevamwe vazhinji vanoparidza shoko—Vanodzidzisa kuti mushure mekumuka kwake kuvakafa Kristu achaonekwa kumaNifai. Zvingangove makore 81 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Vanakomana vaMosaya vane mweya wechiporofita newekuzarurirwa—Vanoenda uyu nenzira yake uyu neyake kunotaura shoko kumaRamani—Amoni anoenda kunyika yaIshmaeri uye obva ave muranda waMambo Ramonai—Amoni anonunura zvipfuyo zvamambo uye achibva auraya vavengi vake pamvura dzeSebhusi. Ndima 1 kusvika ku3, zvingangove mugore 77 Kristu asati azvarwa; ndima 4, zvingangove mugore 91 kusvika kuna77 Kristu asati azvarwa; uye ndima 5 kusvika ku39, zvingangove mugore ra91 Kristu asati azvarwa.
Mambo Ramonai anofunga kuti Amoni ndiye Mweya Mukuru—Amoni anodzidzisa mambo nezveKusikwa, zvekuita kwaMwari nevanhu, norununuro rwunouya nemunaKristu—Ramonai anotenda achibva awira pasi seafa. Zvingangove makore 90 Kristu asati azvarwa.
Ramonai anotambira chiedza cheupenyu husingaperi uye achiona Mununuri—Imba yake inoita seyasvikirwa, vazhinji vanoona ngirozi—Amoni anopunyutswa zvinoshamisa—Anobhabhatidza vazhinji achibva aita chechi mukati mavo. Zvingangove makore 90 Kristu asati azvarwa.
Ishe vanotumira Amoni kuMidhoni kunoburitsa hama dzake mutirongo—Amoni naRamonai vanoona baba vaRamonai, anove ndiye mambo wenyika yose—Amoni anomanikidza mambo akwegura kuti abvumire kuti hama dzake dzisunungurwe. Zvingangove makore 90 Kristu asati azvarwa.
Aroni anodzidzisa maAmarekai nezvaKristu nezverudzikinuro rwake—Aroni nehama dzake vanoiswa mutirongo kuMidhoni—Mushure mekusunungurwa kwavo, vanodzidzisa mumasinagogo uye vachidzora vazhinji—Ramonai anopa vanhu vemunyika yaIshmaeri rusununguko rwekunamata. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Aroni anodzidzisa baba vaRamonai nezveKusikwa, kupunzika kwaAdama, neurongwa hwerununuro muna Kristu—Mambo nemba yake yose vanopinduka—Kugovaniswa kwakaitwa nyika pakati pemaNifai nemaRamani kunotsanangurwa. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Rusununguko rwekunamata rwunodaidzirwa—MaRamani munyika nomwe nemaguta vanopindutswa—Vanozvidaidza kuti vaAndi-Nifai-Rihai uye vanosunungurwa kubva mukutukwa—MaAmarekai nemaAmuroni vanoramba chokwadi. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
MaRamani anorwisa vanhu vaMwari—MaAndi-Nifai-Rihai vanofara muna Kristu uye vanoshanyirwa nengirozi—Vanosarudza kufa pane kuti vazvirwire—Mamwezve maRamani vanotendeutswa. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Kunetsa kwemaRamani kunopararira—Mbeu yemapirisita vaNoa inofa sekuporofitwa kwazvakaitwa naAbhinadhai—MaRamani mazhinji vanopinduka uye vobva vasangana nevanhu vaAndi-Nifai-Rihai—Vanotenda muna Kristu vachichengetedza mutemo waMosesi. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Amoni anofara muna Ishe—Vane rutendo vanosimbiswa naIshe uye vachipiwa ruzivo—Nerutendo vanhu vanokwanisa kuunza zviuru zvemweya mukutendeuka—Mwari vane simba rose uye vanonzwisisa zvinhu zvose. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
Ishe vanotaurira Amoni kuti atungamirire vanhu vaAndi-Nifai-Rihai kusina njodzi—Asangana naAruma, Amoni anofara zvekuti anobva aneta zvekushaya simba—MaNifai vanopa maAndi-Nifai-Rihai nyika yaJeshoni—Vanodaidzwa kuti vanhu vaAmoni. Zvingangove makore 90 kusvika ku77 Kristu asati azvarwa.
MaRamani anokundwa muhondo yakaoma—Makumi ezviuru vanouraiwa—Vakaipa vachaiswa mudambudziko risingaperi; vakarurama vanowana kufara kusingagume. Zvingangove makore 77 kusvika ku76 Kristu asati azvarwa.
Aruma anoda kudaidzira kutendeuka nesimba rengirozi—Ishe vanopa vadzidzisi kumarudzi ose—Aruma anobwinya mubasa raIshe nemukubudirira kwaAmoni nehama dzake. Zvingangove makore 76 Kristu asati azvarwa.
Koriho asingadi Kristu, anoseka Kristu, Rudzikinuro, nemweya wechiporofita—Anodzidzisa kuti hakuna Mwari, hakuna kupunzika kwemunhu, hakuna kurangwa pamusoro pechitema, uye hakuna Kristu—Aruma anopupura kuti Kristu achauya nokutiwo zvose zvinhu zvinoratidza kuti kuna Mwari—Koriho anoda kutoona chiratidzo uye ndokubva aitwa chimumumu—Dhiabhorosi akazviratidza kuna Koriho sengirozi uye akamudzidzisa zvekutaura—Koriho akatsikwa-tsikwa achibva afa. Zvingangove makore 76 kusvika ku74 Kristu asati azvarwa.
Aruma anotungamira basa rekudzosa avo vakanga varasika vemaZoramu—MaZoramu vanoramba Kristu, vanotenda tsika yenhema yekusarudzwa, uye vachinamata neminamato yakanyorwa—Vadzidzisi vanozadzwa neMweya Mutsvene—Matambudziko avo anomedzwa nerufaro rwaKristu. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Aruma anodzidzisa varombo avo vakanga vakapfava nenzira yenhamo dzavo—Rutendo itarisiro yeicho chatisingakwanise kuona asi chiri chokwadi—Aruma anopupura kuti ngirozi dzinoparidza kuvarume, vakadzi, navana—Aruma anofananidza shoko nembeu—Inofanira kudyarwa nokuiswa mupfudze—Yozokura kuva muti umo munozotanhwa muchero woupenyu hwokusingaperi. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Zenosi akadzidzisa kuti vanhu vanofanira kunamata nekurumbidza munzvimbo dzose uye nokutiwo kutongwa kunobviswa pamusana peMwanakomana—Zenoki aidzidzisa kuti tsitsi dzinoitwa nenzira yeMwanakomana—Mosesi akanga asimudza murenje chainge Mwanakomana waMwari. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Amureki anopupura kuti shoko riri muna Kristu mukuponeswa—Kunze kwokunge rudzikinuro rwaitwa vanhu vose vanofa—Mitemo yose yaMosesi inonongedzera kukuzvipira kwoMwanakomana waMwari—Hurongwa hwerununuro rwokusingaperi huri mukutenda nokutendeuka—Namatirai maropafadzo enyama nomweya kuti muwane makomborero—Upenyu huno inguva yokuti munhu agadzirire kusangana naMwari—Shandirai ruponeso rwenyu nokutya pamberi paMwari. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Kuparidzwa kweshoko kunoparadza unyengedzi hwemaZoramu—Vanotandanisa vatendeuki, avo vakabva vanobatana nevanhu vaAmoni kuJeshoni—Aruma anusuwa pamusana pekuipa kwevanhu ava. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Aruma anopupura kuna Hiramani kutendeutswa kwake mushure mekuona ngirozi—Akatambudzika nekurwadziwa kwemweya wakaraswa; akadaidza zita raJesu, uye ndokubva azvarwa naMwari—Rufaro rwunotapira rwakazadza mweya wake—Akaona mhomho dzengirozi dzichirumbidza Mwari—Vazhinji vakatendeutswa vakaraira uye vakaona sezvaakanga araira akaona. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Mahwendefa endarira nemamwe magwaro matsvene anochengetedzwa kuti aunze mweya kuruponeso—MaJaredhi akaparadzwa pamusoro pekuipa kwavo—Mhiko dzavo dzakavandika nezvibvumirano hazvifanire kuzivikanwa nevanhu—Ranganai naIshe mukuita kwenyu kwose—Sekutungamirwa kwakaitwa maNifai neRiahona, saka neshoko raKristu rinotungamira vanhu kuupenyu hwokusingaperi. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Shibhuroni akanetswa pamusana pekururama—Ruponeso rwuri muna Kristu, anove ndiye upenyu nechiedza chenyika—Tsigisa pfungwa dzako. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Chivi cheupombwe chinhu chakaipisisa—Zvivi zvaKoriandoni zvakaita kuti vanhu vamaZoramu vasagamuchire shoko—Rununuro rwaKristu rwunoshanda kune avo vanokutenda vakarwutangira. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Kristu anoita kuti kuve nekumuka kwevakafa kuvanhu vose—Vakafa vatsvene vanoenda kuparadiso, vakaipa vanoenda kurima riri kunze kuti vamirire zuva ravo rokumutswa—Zvinhu zvose zvichadzorerwa pazvakanga zviri panguva yoKumutswa kuvakafa. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Pakumutswa vanhu vachapinda murufaro rusingaperi kana kuti mukusuwa kusingaperi—Kuipa hakuna kumbova kufara—Vanhu venyama havana Mwari panyika—Munhu wose anogamuchira zvakare pakudzorerwa twutsika nezvimwe zvose zvaakanga awana asati afa. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Nguva ino yatigere panyika inguva yokugadzirira kuti munhu akwanise kutendeuka kuti ashandire Mwari—Kuputsika kwakaunza rufu rwenyama nerwomweya kumarudzi ose—Rununuro rwunouya kuburikidza nokutendeuka—Mwari pachake anoripira zvitadzo zvenyika yose—Tsitsi ndedze avo vanotendeuka—Vamwe vose vainomirira kutonga kwakanaka kwaMwari—Tsitsi dzinouya kuburikidza noRudzikinuro—Vakatendeuka zvechokwadi chete vachaponeswa. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Aruma nevanakomana vake vanoparidza shoko—MaZoramu nemamwe maNifai vakapanduka vanove maRamani—MaRamani anorwisa maNifai muhondo—Moronai anopa maNifai nhumbi dzekuzvidzivirira—Ishe vanoratidza kuna Aruma zano ramaRamani—MaNifai vanodzivirira misha yavo, rusununguko, mhuri, nechitendero chavo—Mauto aMoronai neaRihai anokomberedza maRamani. Zvingangove makore 74 Kristu asati azvarwa.
Moronai akaudza maRamani kuti vaite chibvumirano cherunyararo kana vasingade kuparadzwa—Zerahemuna anozviramba izvi, uye kurwa ndokubva kwatanga patsva—Mauto aMoronai anokurira maRamani. Zvingangove makore 74 kusvika ku73 Kristu asati azvarwa.
Hiramani anotenda mazwi aAruma—Aruma anoporofita kuparadzwa kwemaNifai—Anoropafadza nokutuka nyika—Aruma angangodaro akatorwa neMweya, kana sezvakaitwa Mosesi—Kupesana kunokura muChechi. Zvingangove makore 73 Kristu asati azvarwa.
Amarikaya anofunga zvekutora umambo—Moronai anosimudza mureza werusununguko—Anoti vanhu ngavadzivirire kunamata kwavo—Vatendi vechokwadi vanodaidzwa kuti muKristu—Vakasara vemba yaJosefa vachachengetedzwa—Amarikaya nevapanduki vanotizira kunyika yaNifai—Avo vasingatsigire rusununguko vanouraiwa. Zvingangove makore 73 kusvika ku72 Kristu asati azvarwa.
Amarikaya anoshandisa kufurira, kuponda, nokunyengedza kuti ave mambo wemaRamani—Avo vakabva kumaNifai ndivo vakanyanya uipi nehugandanga kupfuura maRamani. Zvingangove makore 72 Kristu asati azvarwa.
Amarikaya anopesvera maRamani kuti varwe nemaNifai—Moronai anogadzirira vanhu vake kuti varwire Kristu vazvidzivirire—Anofara mukuzvitonga nerusununguko uye ari munhu akagwinya waMwari. Zvingangove makore 72 Kristu asati azvarwa.
Mauto emaRamani anotadza kutora maguta akavakirirwa eAmonaiha nereNoa—Amarikaya anotuka Mwari uye achibva ati achanwa ropa raMoronai—Hiramani nehama dzake vanoramba vachisimbisa Chechi. Zvingangove makore 72 Kristu asati azvarwa.
Moronai anodzivirira minda yemaNifai—Vanovaka maguta mazhinji matsva—MaNifai akawirwa nehondo nekuparadzwa mumazuva ehuipi nekutadza kwavo—Moriandoni nevapanduki vake vanokurirwa naTeangumu—Nifaiha anofa, uye mwanakomana wake Pahorani anotora chigaro chekutonga. Zvingangove makore 72 kusvika ku67 Kristu asati azvarwa.
Vanhu vamambo vanotsvaka kupindura mutemo nokuisa mambo—Pahorani nevakasununguka vanotsigirwa nezwi revanhu—Moronai anomanikidza vanhu vamambo kuti varwire nyika yavo kana kuti vauraiwe—Amarikaya nemaRamani vanotora maguta mazhinji akadzivirirwa—Teangumu anorwisa maRamani uye ndokuuraya Amarikaya mutende make. Zvingangove makore 67 kusvika ku66 Kristu asati azvarwa.
Amoroni anoitwa mambo wemaRamani munzvimbo yaAmarikaya—Moronai, Teangumu, naRihai vanotungamirira maNifai mukukunda maRamani muhondo—Guta raMureki rinotorwa zvakare, uye Jakobho muZoramu anouraiwa. Zvingangove makore 66 kusvika ku64 Kristu asati azvarwa.
Vasungwa vemaRamani vanoshandiswa kudzivirira guta reMaguta—Vapanduki mukati memaNifai vanoita kuti maRamani akunde—Hiramani anoitwa mutungamiri wezviuru zviviri zvemajaya evanhu vaAmoni. Zvingangove makore 64 kusvika ku63 Kristu asati azvarwa.
Amoroni naMoronai vanotaurirana zvekuti vadzorerane vasungwa—Moronai anoti maRamani ngavadzokere varegere zvekuponda kwavo—Amoroni anoti maNifai ngavaise zvombo zvavo pasi uye vagove pasi pemaRamani. Zvingangove makore 63 Kristu asati azvarwa.
Moronai anoramba kudzorerana vasungwa—MaRamani vanochengeta vasungwa vanoitwa kuti vadhakwe, uye vasungwa vemaNifai vanobva vasunungurwa—Guta reGidhi rinotorwa pasina kudeuka kweropa. Zvingangove makore 63 kusvika ku62 Kristu asati azvarwa.
Hiramani anotumira tsamba kuna Moronai, achitaura nezvekufamba kuri kuita hondo namaRamani—Andipusi naHiramani vanokunda maRamani—Majaya aHiramani aye zviuru zviviri vanorwa nesimba, rinoshamisa zvekuti hakuna kana mumwechete anouraiwa. Vhesi 1, zvingangove mugore 62 Kristu asati azvarwa; mavhesi 2 kusvika ku19, zvingangove mugore 66 Kristu asati azvarwa; uye mavhesi 20 kusvika ku57, zvingangove mugore ra65 kusvika ku64 Kristu asati azvarwa.
Hiramani anotaura kutorwa kwakaitwa Andipara nokutya uye mushure nekudzivirirwa kweKumeni—Majaya ake echiAmoni vanorwa pasina kutya; vose vanokuvadzwa, asi hapana anouraiwa—Gidhi anotaura zvekuuraiwa nekutiza kwevasungwa vechiRamani. Zvingangove makore 63 Kristu asati azvarwa.
Hiramani, Gidhi naTeomuneri vanotora guta reMandi nenjere—MaRamani anobva—Vanakomana vevanhu vaAmoni vanochengetedzwa sezvo vachimira vakasimba mukurwira rusununguko nerutendo rwavo. Zvingangove makore 63 kusvika ku62 Kristu asati azvarwa.
Moronai anokumbira Pahorani kuti asimbise mauto aHiramani—MaRamani anotora guta reNifaiha—Moronai anoshatirirwa hurumende. Zvingangove makore 62 Kristu asati azvarwa.
Moronai anonyunyuta kuna Pahorani nezvekushaya hanyn’a kwehurumende mukuchengeta mauto—Ishe vanobvumira kuti vakarurama vauraiwe—MaNifai akafanira kushandisa simba ravo rose nezvose zvavanogona kuti vazviponese kuvavengi vavo—Moronai anoti acharwisa hurumende kana vakasapa mauto ake zvavanoda. Zvingangove makore 62 Kristu asati azvarwa.
Pahorani anotaurira Moronai nokumukira nechimurenga chekurwisa hurumende—Vanhu vaMambo vanotora Zarahemura ndokubatana nemaRamani—Pahorani anokumbira ruyamuro rwemauto kuti arwise vapanduki. Zvingangove makore 62 Kristu asati azvarwa.
Moronai anoenda kunoyamura Pahorani munyika yaGideoni—Vanhu vamambo vanoramba kurwira nyika yavo vanouraiwa—Pahorani naMoronai vanotora zvakare Nifaiha—MaRamani vazhinji vanobatana nevanhu vaAmoni—Teangumu anouraya Amoroni uye iye anouraiwawo—MaRamani anotandaniswa munyika, uye kwobva kwave nerunyararo—Hiramani anodzokera kuhushumiri uye achibva avaka Chechi. Zvingangove makore 62 kusvika ku57 Kristu asati azvarwa.
Shibhuroni anotora zvinyorwa zvinoera uye mushure zvozotorwa naHiramani—MaNifai mazhinji anofamba kuenda kunyika iri kuchamhembe—Hagoti anovaka ngarava, dzinofamba mugungwa rekumadokero—Moronaiha anokurira maRamani muhondo. Zvingangove makore 56 kusvika ku52 Kristu asati azvarwa.
Pahorani wechipiri anove mutongi mukuru uye obva apondwa naKishikumeni—Pakumenai anotora chigaro chekutonga—Korianduma anotungamira mauto emaRamani, anotora Zarahemura, uye anouraya Pakumenai—Moronaiha anokunda maRamani uye obva atora Zarahemura, uye Korianduma anouraiwa. Zvingangove makore 52 kusvika ku50 Kristu asati azvarwa.
Hiramani, mwanakomana waHiramani, anove mutongi mukuru—Gadhiandoni anotungamira chikwata cha Kishikumeni—Muranda waHiramani anouraya Kishikumeni, uye chikwata chaGadhiandoni chinotizira murenje. Zvingangove makore 50 kusvika ku49 Kristu asati azvarwa.
MaNifai mazhinji anotamira kunyika iri kuchamhembe—Vanovaka dzimba dzosemende uye vachibva vachengeta zvinyorwa—Makumi ezviuru vanopinduka uye vachibhabhatidzwa—Shoko raMwari rinotungamira vanhu kuruponeso—Nifai mwanakomana waHiramani anotora chigaro chekutonga. Zvingangove makore 49 kusvika ku39 Kristu asati azvarwa.
Vapanduki vevanhu vaNifai vanobatana nemaRamani uye vobva vatora nyika yeZarahemura—MaNifai anokurirwa pamusana peuipi hwavo—Chechi inove diki, uye vanhu vanorenda semaRamani. Zvingangove makore 38 kusvika ku30 Kristu asati azvarwa.
Nifai naRihai vanoisa nguva yavo yose mukuparidza—Mazita avo anoita kuti vaite upenyu kuti hufanane nemadzitateguru avo—Kristu anonunura avo vanotendeuka—Nifai naRihai vanopindutsa vazhinji uye vanoiswa mutirongo, uye vanokomberedzwa nemoto—Gore rerima rinofugidza mazana matatu evanhu—Nyika inondendemera, uye izwi rinoudza vanhu kuti vatendeuke—Nifai naRihai vanotaura nengirozi, uye mhomho inokomberedzwa nemoto. Zvingangove makore 30 Kristu asati azvarwa.
MaRamani akarurama anoparidzira maNifai ane uipi—Vose vanhu ava vanobudirira munguva yerunyararo nekuguta—Rusifa, munyori wechitema, anoita kuti mwoyo yevakaipa nemakororo aGadhiandoni imuke mukuponda nemuutsinye—Makororo anotora hurumende yemaNifai. Zvingangove makore 29 kusvika ku23 Kristu asati azvarwa.
Nifai anorambwa kuchamhembe uye achibva adzokera kuZarahemura—Anonamata ari panharire yebindu rake uye achibva adaidza vanhu kuti vatendeuke kana kufa. Zvingangove makore 23 kusvika ku21 Kristu asati azvarwa.
Nhubu dzevatongi dzinotsvaka kufurira vanhu kuti vamukire Nifai—Abrahama, Mosesi, Zenosi, Zenoki, Eziasi, Isaya, Jeremia, Rihai naNifai vose vakapupura nezvaKristu—Nokufemerwa Nifai anotaura kupondwa kwemutongi mukuru. Zvingangove makore 23 kusvika ku21 Kristu asati azvarwa.
Nhumwa dzinoona mutongi mukuru akafa pachigaro chekutonga—Dzinoiswa mutirongo uye dzozosunungurwa mushure—Nekufemerwa Nifai anoziva kuti Seandumu ndiye aponda—Nifai anobvumwa nevamwe semuporofita. Zvingangove makore 23 kusvika ku21 Kristu asati azvarwa.
Ishe vanopa Nifai simba rekunama—Anopiwa simba rekusunga kana kusunungura pasi nekudenga—Anoudza vanhu kuti vatendeuke kana kufa—Mweya unomutakura kumhomho nemhomho. Zvingangove makore 21 kusvika ku20 Kristu asati azvarwa.
Nifai anonyengetedza Ishe kuti vaise nzara kunze kwehondo—Vazhinji vanofa—Vanotendeuka, uye Nifai obva akumbira Ishe mvura—Nifai naRihai vanotambira zvakazarurwa zvizhinji—Makororo aGadhiandoni anozvisimbisa munyika. Zvingangove makore 20 kusvika ku6 Kristu asati azvarwa.
Vanhu havana kutsiga uye zvirema uye vachikurumidza kuita zvakaipa—Ishe vanoranga vanhu vavo—Kusave chinhu kwevanhu kunoenzaniswa nesimba raMwari—Muzuva rekutongwa, vanhu vachawana upenyu husingaperi kana kuparadzwa kusingaperi. Zvingangove makore 6 Kristu asati azvarwa.
Samueri muRamani anoporofita kuparadzwa kwamaNifai kana vachinge vasina kutendeuka—Ivo neupfumi hwavo vanotukwa—Vanoramba nokutema vaporofita, vakakomberedzwa namadhimoni, vanotsvaka rufaro mukuita zvakaipa. Zvingangove makore 6 Kristu asati azvarwa.
Samueri anoti kuchazove nechiedza usiku nenyenyedzi itsva pakuzvarwa kwaKristu—Kristu anodzikinura vanhu kubva pakufa kwenyama nomweya—Zvimwe zvezvinhu zvairatidza kufa kwake zvaiva mazuva matatu erima, kutsemurwa kwamabwe, nekutibinuka kwezvinhu. Zvingangove makore 6 Kristu asati azvarwa.
Ishe vanoranga maNifai nokuti vanovada—MaRamani akapindutswa vakatakamara uye vakasimba mukutenda kwavo—Ishe vachava netsitsi kumaRamani mumazuva ekupedzisira. Zvingangove makore 6 Kristu asati azvarwa.
MaNifai anotenda kuna Samueri anobhabhatidzwa naNifai—Samueri anotadzikwa nemiseve yavo namatombo emaNifai asingatendeuke—Vamwe vanoomesa mwoyo yavo, vamwe vanoona ngirozi—Vasingatendi vanoti hachizi chinhu chine maturo chokuti vatende muna Kristu nokuuya kwake muJerusarema. Zvingangove makore 6 kusvika ku1 Kristu asati azvarwa.
Nifai, mwanakomana waHiramani, anobva munyika iyi, mwanakomana wake Nifai anochengeta zvinyorwa—Kana dai zviratidzo nezvishamiso zvakawanda, vakaipa vanoronga kuuraya vatsvene—Usiku hwekuzvarwa kwaKristu hunosvika—Chiratidzo chinopiwa, uye nyenyedzi itsva inobuda—Manyepo nokunyengedza kunowanda, makororo aGadhiandoni anouraya vakawanda. Ringangove gore 1 kusvika ku4 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Uipi noruvengo zvinowanda muvanhu—MaNifai nemaRamani vanobatana kuti vazvidzivirire kumakororo aGadhiandoni—MaRamani akapinduka anove vachena uye vobva vadaidzwa kuti maNifai. Zvingangove makore 5 kusvika ku16 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Gidhiyanihai, mutungamiri wemaGadhiandoni, anoti Rakoniasi nemaNifai vazvipire kwaari zvose nenyika yavo—Rakoniasi anoisa Gidhigidhonai semutungamiri mukuru wemauto—MaNifai anoungana muZarahemura nemuMaguta kuti vazvirwire. Zvingangove makore 16 kusvika ku18 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mauto emaNifai anokurira makororo aGadhiandoni—Gidhiyanihai anouraiwa, uye anotora nzvimbo yake, Zemunaraya, anosungirirwa—MaNifai anorumbidza Ishe nokukunda kwavo. Zvingangove makore 19 kusvika ku22 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaNifai vanotendeuka vachibva uye vasiya zvitema zvavo—Mormoni anonyora rungano rwevanhu vake uye achibva avataurira shoko risingapere—Israeri ichaunganidzwa kubva mukupararira kwayo kwenguva refu. Zvingangove makore 22 kusvika ku26 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaNifai vanobudirira—Kuzvida, hupfumi, norusarura zvinobva zvabuda—Chechi rinotsemurwa mukusawirirana pamusana pevanobva mariri—Satani anotungamira vanhu mukupanduka kuri pachena—Vaporofita vazhinji vanodaidzira kutendeuka vobva vauraiwa—Vapondi vavo vanorangana kutora hurumende. Zvingangove makore 26 kusvika ku30 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mutongi mukuru anopondwa, hurumende inoparadzwa, uye vanhu vanokamurana mumarudzi avo—Jakobho, munhu asingade Kristu, anove mambo wechikwata chemuruvande—Nifai anoparidza kutendeuka norutendo munaKristu—Ngirozi dzinomudzidzisa mazuva ose, uye anomutsa munin’ina wake kubva kuvakafa—Vazhinji vanotendeuka uye vachibva vabhabhatidzwa. Zvingangove makore 30 kusvika ku33 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Dutu, kundengendeka kwenyika, moto, chamupupuri, kushanduka kwekunze nechimbi-chimbi zvinotaura kuroverwa kwaKristu—Vanhu vazhinji vanoparadzwa—Rima rinofukidza nyika kwamazuva matatu—Avo vanosara vanochema nhamo yavo. Zvingangove makore 33 kusvika ku34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Murima, izwi raKristu rinotaura nezvekuparadzwa kwevanhu vazhinji nemaguta pamusana pekuipa kwavo—Anotaurawo nezveutsvene hwake, achibva adaidzira kuti mutemo waMosesi wazadzikiswa, uye ndokubva akoka vanhu kuti vauye kwaari vaponeswe. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Munyika mune runyararo kwechinhambo chakati kuti—Izwi raKristu rinovimbisa kuunganidza vanhu vake sekuunganidza kunoita huku hukwana dzayo—Vazhinji vevanhu vakachengetedzwa. Zvingangove makore 34 kusvika ku35 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Baba vanopupura pamusoro poMwanakomana wavo Wavanoda—Kristu anozviratidza achitaura pamusoro pezverudzikinuro rwake—Vanhu vanobata mavanga emaronda mumaoko ake, mumakumbo, naparutivi pake—Vanochema vachiti Hosana—Anovaratidza nzira yokubhabhatidza nayo—Mweya wokukakavadzana ndewadhiabhorosi—Dzidziso yaKristu ndeyekuti vanhu vanofanira kutenda nokubhabhatidzwa nokugamuchira Mweya Mutsvene. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anodaidza nokuraira vaneGumi neVaviri—Anopa kumaNifai nhoroondo yakafanana neMharidzo yapagomo—Anotaura Mitemo yemaRopafadzo—Dzidziso dzake dzinotaura zviri pamusoro pemitemo yaMosesi—Vanhu vanorairwa kuva vatsvene saiye naBaba vatsvene—Enzanisa naMateo 5. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anodzidzisa maNifai munamato waIshe—Vanofanira kuisa upfumi hwavo kudenga—VaneGumi neVaviri muushumiri hwavo vanorairwa kuti vasafunge zvezvinhu zvenyama—Enzanisa naMateo 6. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anoraira: Musatonge; kumbirai kuna Mwari; chenjererai maporofita venhema—Anovimbisa ruponeso kune avo vanoita kuda kwaBaba—Enzanisa naMateo 7. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anotaura kuti murairo waMosesi unozadzikiswa maari—MaNifai ndivo vamwe vemakwai aakataura nezvawo muJerusarema—Nokuda kwekusarurama, vanhu vaIshe muJerusarema havazivi nezve makwai aIsraeri akapararira. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu achashanyira mamwe makwai akarasika eIsraeri—Mumazuva ekupedzisira shoko richaenda kumaJentairi rozoenda kune vemba yaIsraeri—Vanhu vaIshe vachawirirana apo achaunza zvakare Zioni. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anotaurira vanhu kuti vafungisise pamusoro pamazwi ake nokunamata kuti vanzwisise—Anoporesa varwere vavo—Anonamatira vanhu, achishandisa mutauro usinganyoreki—Ngirozi dzinoparidzira uye moto unokomberedza vaduku vavo. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anotangisa sakaramende mumaNifai—Vanorairwa kunamata nguva dzose muzita rake—Avo vanodya nyama yake nokunwa ropa rake vasina kukodzera vanoraswa—Vadzidzi vanopiwa simba rokupa Mweya Mutsvene. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Vadzidzi vanegumi nevaviri vanoparidza kuvanhu nokunamatira Mweya Mutsvene—Vadzidzi vanobhabhatidzwa nokugamuchira Mweya Mutsvene nokushumira kwengirozi—Jesu anonamata nemazwi asingakwanise kunyorwa—Anopupura pamusoro pokutenda kukuru kwamaNifai. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anoita chishamiso pakuvapa chingwa newaini uye zvakare anopa sakaramende kuvanhu—Zvizvarwa zvaJakobo zvakasara zvichasvika pakuziva Ishe Mwari wavo vozogara mumaAmerica—Jesu muporofita saMosesi, zve maNifai vana vavaporofita—Vamwe vevanhu vaIshe vachaungana kuJerusarema. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Israeri ichaungana pamwechete panouya Bhuku raMormoni—MaJentairi vanenge vave vanhu vakasununguka muAmerica—Vachaponeswa kana vakatenda nokuteerera; kana, kuti vacharaswa vagoparadzwa—Israeri ichavaka Jerusarema Idzva, uye marudzi akarasika achadzoka. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mumazuva ekupedzisira, Zioni nematunhu ayo zvichamiswa, uye Israeri ichaunganidzwa netsitsi nerudo—Vachakunda—Enzanisa naIsaya 54. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anotsigira mazwi aIsaya—Anoraira vanhu kuti vanzvere maporofita—Mazwi aSamueri muRamani ari maererano noKumutswa kwavakafa anoiswa pazvinyorwa zvavo. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mutumwa waIshe achagadzirira nzira yoKuuya Kwechipiri—Kristu achagara pakutonga—Israeri inorairwa kubvisa chegumi nemupiro—Bhuku rokurangarira rinochengetwa—Enzanisa naMaraki 3. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
PaKuuya Kwechipiri, vanozvikudza nevakaipa vachapiswa samashanga—Erija achadzoka zuva guru iri rinotyisa risati rasvika—Enzanisa naMaraki 4.
Jesu anotsanangura zvinhu zvose kubva kumavambo kusvika kumagumo—Vacheche navaduku vanotaura zvinhu zvinoshamisa izvo zvisinganyoreke—Avo vari muChechi yaKristu zvinhu zvose zvavainazvo ndezvavo vose. Zvingangove makore 34 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu anovaraira kuti vadaidze Chechi muzita rake—Basa rake nomupiro wake wokudzikinura ndiro shoko rake—Vanhu vanorairwa kuti vatendeuke nokubhabhatidzwa kuti vagotsveneswa neMweya Mutsvene—Vakafanira kuva saJesu. Zvingangove makore 34 kusvika ku35 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Vapfumbamwe vevaneGumi neVaviri vanokumbira uye vanovimbiswa nhaka muumambo hwaKristu kana vachinge vafa—MaNifai Vatatu vane chido vanopiwa simba pamusoro porufu kuti varambe vari panyika kusvikira Jesu auya zvakare—Vanoshandurwa nokuona zvinhu zvisingatenderwi kutaurwa, zvino vari kushumira pakati pavanhu. Zvingangove makore 34 kusvika ku35 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Kuuya kweBhuku raMormoni chiratidzo chokuti Ishe vatangisa kuunganidza maIsraeri nokuzadzikisa chibvumirano chake—Avo vanoramba zvaachazarura mumazuva ekupedzisira nezvipo zvake vachapiwa mhaka. Zvingangove makore 34 kusvika ku35 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaJentairi vamazuva ekupedzisira vanotaurirwa kuti vatendeuke, nokuuya kuna Kristu, vazoverengerwa kune vemba yaIsraeri. Zvingangove makore 34 kusvika ku35 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaNifai nemaRamani vose vakatendeukira kuna Ishe—Vane zvinhu zvimwe chete vose, vanoshanda zvishamiso, vobudirira munyika—Kwapera makore mazana maviri, kupesana, kuipa, chechi dzenhema, kutambudzwa kwakatangisa—Kwapera makore mazana matatu, vose maNifai nemaRamani vakanga vaipa—Amaroni anoviga zvinyorwa zvinoera. Zvingangove makore 35 kusvika ku321 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Amaroni anorairidza Mormoni pamusana pezvinyorwa zvinoera—Hondo inotangisa pakati pamaNifai namaRamani—MaNifai matatu anotorwa—Kuipa, kusatenda, kunyengedza, nouroyi zvakavapo. Zvingangove makore 321 kusvika ku326 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mormoni anotungamira mauto emaNifai—Ropa nekudeuka kweropa kwakatsvaira munyika—MaNifai anonyunyuta nokuchema nekusuwa kwevakaraswa—Zuva ravo renyasha rakapfuura—Mormoni anowana mahwendefa aNifai—Hondo dzinoenderera. Zvingangove makore 327 kusvika ku350 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mormoni anochemera kuti maNifai atendeuke—Vanowana kukurira kukuru nembiri nesimba ravo—Mormoni anoramba kuvatungamira, uye minamato yake yaanovanamatira haina rutendo—Bhuku raMormoni rinokoka marudzi aIsraeri ari gumi nemaviri kuti vatende vhangeri. Zvingangove makore 360 kusvika ku362 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Hondo nokuurayana kunoenderera—Vakaipa vanoranga vakaipa—Kuipa kukuru kwakange kusati kwamboitika muIsraeri kwakavapo—Vakadzi navana vanoitwa mipiro kuzvifananidzo—MaRamani anotangisa kutsvaira maNifai pamberi pavo. Zvingangove makore 363 kusvika ku375 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mormoni anotungamira zvakare maNifai nemauto avo mukurwa kweropa nekudeuka kweropa—Bhuku raMormoni richauya kuzopwisa yose Israeri kuti Jesu ndiye Kristu—Pamusana pekusatenda kwavo, maRamani achapararira uye Mweya ucharega kushanda navo—Vachatambira vhangeri kubva kumaJentairi mumazuva ekupedzisira. Zvingangove makore 375 kusvika ku384 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaNifai anoungana kunyika yeKumora mukurwa kwokupedzisira—Mormoni anoviga zvinyorwa zvinoera muGomo reKumora—MaRamani anokunda, rudzi rwaNifai rwunoparadzwa—Mazana ezviuru vanouraiwa nemunondo. Zvingangove makore 385 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Mormoni anokoka maRamani emazuva okupedzisira kuti vatende muna Kristu, vagamuchire vhangeri rake, vagoponeswa—Avo vose vanotenda Bhaibheri vanozotenda Bhuku raMormoni. Zvingangove makore 385 shure kwekunge Kristu azvarwa.
MaRamani anotsvaka nokuparadza maNifai—Bhuku raMormoni richauya kuburikidza nesimba raMwari—Matambudziko kune avo vanoshatirwa nekukanganisa basa raMwari—Zvinyorwa zvemaNifai zvichauya muzuva iro rokuipa, kuderera murutendo netsika, nekurasika. Zvingangove makore 400 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Moronai anoshevedza vasingatendi muna Kristu kuti vatendeuke—Anotaura pamusana paMwari vezvishamiso, vanozarurira nokudurura zvipo nezviratidzo kune avo vakatendeseka—Zvishamiso zvinomira nokusatenda—Zviratidzo zvinotevera avo vanotenda—Vanhu vanokurudzirwa kuti vave noungwaru uye vachengete mirairo. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Moronai anopfupikisa zvinyorwa zvaEta—Nhorohondo yekuberekwa kwaEta inoitwa—Mutauro wemaJaredhi hauvhiringidzwe paShongwe yeBaberi—Ishe vanovavimbisa kuvatungamirira kunyika yakanaka nekuvaita rudzi rwukuru.
MaJaredhi anogadzirira rwendo rwekuenda kunyika yechipikirwa—Inyika yakanaka zvekuti wose munhu arimo akafanira kushandira Kristu kana kubviswamo—Ishe vanotaura nemukoma waJaredhi kwemaawa anokwana matatu—MaJaredhi vanovaka magwa—Ishe vanobvunza mukoma waJaredhi kuti ataure kuti magwa achaiswa mwenje sei.
Mukoma waJaredhi anoona munwe waIshe zvavanobata matombo gumi nematanhatu—Kristu anoratidza muviri wake wemweya kumukoma waJaredhi—Avo vane ruzivo rwakakwana havagone kuchengetwa vari kunze kwechidzikatidzo—Zvidudziriso zvinopirwa kuitira kuburitsa pachena zvinyorwa zvemaJaredhi.
Moronai anoudzwa kuti aname zvinyorwa zvemukoma waJaredhi—Hazvizoiswa pachena kudakara vanhu vave nerutendo rwunenge rwemukoma waJaredhi—Kristu anoudza vanhu kuti vatende mazwi ake neayo evadzidzi vake—Vanhu vanoudzwa kuti vatendeuke, vatende vhangeri, uye vaponeswe.
Vapupuri vatatu nebasa pacharo zvichamira seuchapupu hwechokwadi cheBhuku raMormoni.
Magwa emaJaredhi anofambiswa nemhepo kuenda kunyika yechipikirwa—Vanhu vanorumbidza Ishe nokunaka kwavo—Oraiha anoitwa mambo wavo—Jaredhi nemukoma wake vanofa.
Oraiha anotonga mukururama—Pakati pekubvutirana masimba nekunetsana, kunomiswa umambo hunokukwikwidzana hwaShuru naKoho—Vaporofita vanotuka huipi hwevanhu nekunamata zvifananidzo kwevanhu, avo vanobva vatendeuka.
Mune kunetsana nekupesana pamusoro peumambo—Akishi anoita chikwata chemuruvande chine chitsidzo chekuuraya mambo—Zvikwata zvemuruvande ndezvadhiabhorosi uye zvinokonzera kuparadzwa kwemarudzi—MaJentairi emazuva ano vanoyambirwa nezvezvikwata zvemuruvande zvinotsvaka kutora rusununguko rwenyika dzose, marudzi, nenyika.
Umambo hunobva kune uyu huchienda kune uyo nenhaka, kunyengedza, nekuponda—Ema akaona Mwanakomana weKururama—Maporofita vazhinji vanodaidzira rutendeuko—Nzara nenyoka dzine uturu zvinonetsa vanhu.
Mambo uyu anotsiva uyo—Vamwe vemadzimambo vakarurama; vamwe vane uipi—Kana kuine kururama, vanhu vanoropafadzwa uye vachibva vaitwa kuti vabudirire naIshe.
Hondo, kupandukirana, zve nehuipi zvinokura muupenyu hwemaJaredhi—Vaporofita vanofembera kuparadzwa zvachose kwemaJaredhi kunze kwokunge vatendeuka—Vanhu vanoramba mazwi emaporofita.
Muporofita Eta anokurudzira vanhu kuti vatende muna Mwari—Moronai anotaura zvishamiso nezvinoshamisa zvinoitwa nerutendo—Rutendo rwakaita kuti mukoma waJaredhi aone Kristu—Ishe vanopa vanhu kushaya simba kuti vazvirereke—Mukoma waJaredhi akasimudza Gomo Zerini nerutendo—Rutendo, ruvimbo, nerudo rwakadzama ndizvo zvinodiwa muruponeso—Moronai akaona Jesu vakatarisana.
Eta anotaura nezveJerusarema Idzva ichavakwa muAmerica nembeu yaJosefa—Anoporofita, anokandwa kunze, anonyora rungano rwemaJaredhi, uye ndokutaura kuparadzwa kuchaitwa maJaredhi—Hondo inopisa munyika yose.
Zvitadzo zvevanhu zvinoita kuti nyika itukwe—Korianduma anoita hondo naGireadi, naRibhi, naShizi—Ropa nekudeuka kwaro kunozadza nyika.
Zviuru zvezviuru zvemaJaredhi zvinouraiwa muhondo—Shizi naKorianduma vanounganidza vanhu vose kuti vanourayana nekurwa—Mweya waIshe unoregera kushanda navo—Rudzi rwemaJaredhi rwunoparadzwa zvachose—Korianduma chete ndiye anosara.
Moronai anonyora kubatsira maRamani—MaNifai ayo asingarambe Kristu anourayiwa. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Jesu akapa vadzidzi vanegumi nevaviri vechiNifai simba rokupa chipo choMweya Mutsvene. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Magosa anogadza vapirisita nevadzidzisi nokuvaisa maoko pamusoro. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Kunamatira kunoita magosa nevapirisita chingwa chechirairo kunotsanangurwa. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Nzira yokunamatira nayo chirairo chewaini. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Vanhu vatendeuka vanobhabhatidzwa nokufambirwa—Nhengo dzesangano dzinotendeuka dzinoregererwa—Misangano inotungamirirwa nesimba roMweya Mutsvene. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Kukokwa kunopihwa kwekupinda muzororo raIshe—Namatai nomwoyo wose—Mweya waKristu unoita kuti vanhu vazive chakanaka nechakaipa—Satani anonyengedza vanhu kuti varambe Kristu vaite zvakaipa—Vaporofita vanotaura kuuya kwaKristu—Kuburikidza nokutenda, zvishamiso zvinoitwa uye ngirozi dzinoparidza—Vanhu vanofanira kutarisira upenyu hwokusingaperi vachibva vagara murudo rwakadzama. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Kubhabhatidzwa kwevana vaduku chinhu chakaipa chinonyadzisa—Vaduku vapenyu muna Kristu nokuda kwoRudzikinuro—Kutenda, kutendeuka, kuzvininipisa nomwoyo munyoro, kugamuchira Mweya Mutsvene, nokushingirira kusvika kumagumo kunosvitsa kuruponeso. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Vose maNifai nemaRamani vakashata uye vadzikira—Vanorwadzisana nokuurayana—Mormoni anonamata kuti nyasha nokunaka kuve pana Moronai nokusingaperi. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.
Uchapupu hweBhuku raMormoni hunouya nesimba roMweya Mutsvene—Zvipo zvoMweya zvinopiwa kune vanotenda—Zvipo zvoMweya zvinofambidzana nokutenda—Mazwi aMoronai anotaura achibva muguruva—Uyai kuna Kristu, muitwe vakarurama maari, nokuita kuti mweya yenyu ive mitsvene. Zvingangove makore 401 kusvika ku421 shure kwekunge Kristu azvarwa.